छाेरा हुन वा छाेरी दुवै बराबरी भन्ने भनाइ अनुसार छाेराले गर्ने काम पनि छाेरीले गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेकी छिन् माेरङ सुन्दर हरैंचा ८ सलकपुर ढकाल चाेकमा डेरा गरि बस्ने स्मृति दाहाल ।विगत केही दिन अघि आमा छत्रकुमारी दाहालकाे विरामी भएर उपचारकाे क्रममा नि,धन भए पछि कान्छी छाेरी स्मृति दाहाल टाउकाेमा सेताे टालाे बाँधेर धार्मिक परम्परा अनुसार आमाकाे क्रियापुत्रीमा बसेकी छन् । स्मृति मेचि क्याम्पसकी पूर्व विद्यार्थी हुन् । उनले पढाइमा डिग्री गरेकी छिन् ।
५ जना दिदिबहिनी मध्ये परिवारमा कान्छी छाेरीकाे रुपमा रहेकी स्मृतिकाे जन्म २०४६ सालमा भएको थियाे । उनकाे स्थायी ठेगाना झापाकाे भद्रपुर १० चन्द्रगढी हाे । स्मृतिकाे परिवारमा आफ्ना आतमा दाजुभाइ नभए पछि उनी आमाकाे काजकिरियामा बसेकी हुन् । स्मृतिकाे आमाकाे उपचारका क्रममा माेरङकाे सुन्दरहरैंचामा केही महिना देखि उनकाे परिवार डेरा गरि बस्दै आएकाे थियाे ।
लामाे समय देखि सुगर तथा पेसर भएर थाला परेकी ६३ बर्षिय स्मृतिकी आमाकाे उपचारमा धेरै काेसिस गरे पनि बचाउन नसकिएको तथा परिवारकाे धेरै खर्च भएको स्व. छत्रकुमारीका देवर सूर्यप्रसाद दाहालले बताए । उनले भाउजूकाे काम गर्ने अरु आफ्न्त तथा नाताका दाजुभाइ भए पनि छाेरी स्मृतिले आफ्नी आमाकाे काम आफैले गर्ने इच्छा राखे पछि उनीलाई नै १३ दिनकाे कामका लागि अघि सारिएको उल्लेख गरे ।
आमाबाबुकाे काममा बढी मात्रामा छाेराहरु क्रियापुत्रीकाे रुपमा समाजमा बस्ने चलन भए पनि स्मृतिले आमाकाे नि,धन भए पछि क्रीया गरेर समाजमा उदाहरणीय काम गरेकाे सुन्दरहरैंचा नगरपालिका वडा न. ८ का वडा सदस्य विण्णुप्रसाद आचार्यले बताए ।
Previous तीज नजिकिदै गर्दा, ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य,
Next लाइसेन्स को लागि सातै प्रदेशमा खुल्यो अनलाइन फारम, यस्तो छ भने तरिका (हेर्नुहोस् सुचना सहित)